किरात राईको बृहत प्राज्ञिक बहस (भिडियो सहित) «
किरात राईको बृहत प्राज्ञिक बहस (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:२७
काठमाडौं। किरात राई जातिको दर्शन, इतिहास, भाषा, लिपि, साहित्य, मुन्दुम, संस्कृति, र कलामाथिको ऐतिहासिक प्राज्ञिक गोष्ठी काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको छ ।
किरात राई प्रज्ञा परिषद्का कुलपति जय कुमार राईले सभाध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले यस्तो वौदिक गोष्ठीले नेपालको एउटा ऐतिहासिक सभ्यता र इतिहासको उत्खनन गर्नमा महत्वपुर्ण भुमिका रहने बताए।
त्यस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइँला र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङ्गले शुभकामना दिंदै राम्रो कामको थालनी गरेको भन्दै यसले समग्र नेपालको इतिहास र सभ्यतामा कोसेढुंगा साबित हुने विचार ब्यक्त गरे।
भाषाशास्त्री प्राध्यापक नोवलकिशोर राई र बैरागी काइँलाले किरातहरुको इतिहास, कला, सस्कृति र मुन्दुममाथिको प्रवचनबाट आजको दोस्रो सत्र सुरु भएको थियो।
‘किरात इतिहास’ विषयमाथिको छलफलमा दुर्गामणि राईले अध्यक्षता गरेका थिए भने मन्जुल याक्थुम्बाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए र त्यसमाथि प्राध्यापक देनेशराज पन्त, उप-प्राध्यापक कमलजंग राई र डा. लाल रपचाले टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसैगरी समाजशास्त्रीहरु जितपाल किरात, डा. डम्बर चेम्जोङ, डा. जनक राई (सहजकर्ता), डा. विष्णु राईले ‘आजको किरात समाज’ माथि बहस गरे ।भाषाशास्त्री, समाजशास्त्री, संस्कृतिविद्, सरोकारवाला र गैरकिरात प्राज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।
किरात राई यायोक्खाअन्तर्गतको किरात राई प्रज्ञा परिषद्ले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यो कार्यक्रम २०७२ साउनमा नै सम्पन्न गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका भए पनि महाभूकम्पले रोकिएको थियो।